I-Gros Morne Tiny Chalets (Chalet 5 of 7)
I-Gros Morne Tiny Chalets itholakala enhliziyweni ye-Gros Morne National Park, emphakathini wase-Rocky Harbour, e-NL., indawo elungele abafuna uhambo kanye nabathandi bamagugu amasiko.
Lezi zindlu zangasese ezintsha nezithokomele zitholakala kalula eduze nokudla kwasendaweni, ukuzijabulisa, izitolo, ukuvakasha kwezikebhe, uhambo lokudoba, i-kayaking, izindlela ezidumile zokuqwala izintaba, kanye nebanga nje elifushane lokuhamba ukusuka phambi kwamanzi lapho izivakashi zingajabulela khona ukushona kwelanga okumangalisayo okubheke olwandle lwe-Atlantic.
Lezi zindlu zangasese ezintsha zakhiwe endaweni futhi zenziwe ngamapulangwe e-spruce aseNewfoundland. I-chalet ngayinye ixutshwe kancane nge-decor yasogwini/yasolwandle.
Athokomele kakhulu futhi anomqondo ovulekile anombhede wendlovukazi othokomele ovulekele ekhishini/indawo yokuhlala. Imibhede emi-2 yabantu abangabodwana ingeyesitayela sombhede oyibhilidi ohlukaniswe nekhishi/indawo yokuhlala ngomnyango oshelelayo. Indlu yangasese nayo iyimfihlo enomnyango oshelelayo futhi ifakwe neshawa yokumisa.
Sicela uqaphele: lawa ma-chalets amancane awanawo uhla/uhhavini wokupheka, kodwa ane-hotplate kanye newosososo we-Broil King oneshibhili eseceleni ngezidingo zakho zokupheka. Kukhona ne-microwave, i-toaster, iketela, ibhodwe lekhofi nesiqandisi esincane ukuze kube lula kuwe.
Ikhaya lethu lisendaweni eseduze naleyo yama-chalets amancane. Singathanda ukuthi izivakashi zisivakashele uma zinemibuzo noma zidinga usizo.